Dhalinyaro Gadoodsan Oo Dhibaato Xoogan U Geysatay Xafiiskii Imtixaanaadka Iyo Qaar Ka Mid Ah Shaqaalaha Jaamacadda Hargeysa
Submitted by Anonymous on Mon, 07/27/2015 - 06:17
July 27, 2015 Hargeysa (Cadceed) – wararka hordhaca ah ee naga soo gaadhaya Jaamacadda Hargeysa ayaa sheegaya in koox dhalinyaro ah oo la soo abaabulay ay goo-gooyeen isla markaana dhibaato u gaysteen xafiiskii Imtixaanaadka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha Jaamacadda.
Read more about Dhalinyaro Gadoodsan Oo Dhibaato Xoogan U Geysatay Xafiiskii Imtixaanaadka Iyo Qaar Ka Mid Ah Shaqaalaha Jaamacadda Hargeysa
Read more about Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo shaaciyay in shir Calami ah lagu qaban doono Dhawaan Muqdisho
Madaxweyne Siilaanyo Oo Gaadhay Ciidamada Jiida Hore iyo Magaalada Laascaanood
Read more about Madaxweyne Siilaanyo Oo Gaadhay Ciidamada Jiida Hore iyo Magaalada Laascaanood
Submitted by Anonymous on Mon, 07/27/2015 - 06:05
Read more about Wasaaradda Maliyadda oo shaacisay in la dhimayo Muushaaraadka Shaqaalaha Dowladda
CADAALAD DARADA XARUNTA IMTIXAANAADKA QARANKU WAA MID HORSEEDI KARTA KACDOON ARDADAY OO KA DHACA DHAMMAAN GODOLADA SOMALILAND……..
Submitted by Anonymous on Mon, 07/27/2015 - 05:54
Maalintii arbacadii ee 23ka bishan July ayaa laga bilaabay xarunta imtixaanaadka sixista imtixaankii ay ardaydu u fadhiisteen bishii hore ee june 8deedii. Dhaliisha imtixaanka oo u badnaa xaga tayadiisa iyo diyaarintiisa oo ahaaa mid suuq luuga sameenayay buugta macaash doonka iyo waliba iyadoo qish aan caadi ahayn ka dhacay ayay maantana ugu darsantay nidaam xumo xaga saxistissa ah.
Read more about CADAALAD DARADA XARUNTA IMTIXAANAADKA QARANKU WAA MID HORSEEDI KARTA KACDOON ARDADAY OO KA DHACA DHAMMAAN GODOLADA SOMALILAND……..
Submitted by Anonymous on Mon, 07/27/2015 - 05:48
Read more about joojinta Gudniinka Fircooniga iyo Guurka qasabka ah oo laga hadlay
15 ku dhimatay qaraxii Jazeera Hotel
Submitted by Anonymous on Mon, 07/27/2015 - 05:20
Shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay konton qofna waa ay ku dhaawacmeen qaraxii Jazeera Hotel oo aad u waynaa.
Read more about 15 ku dhimatay qaraxii Jazeera Hotel
Submitted by Anonymous on Mon, 07/27/2015 - 05:09
Read more about Brics lets Africa create own destiny
Suuqa saamiyada Shiinaha oo hoos u dhacay
Submitted by Anonymous on Mon, 07/27/2015 - 05:01
Suuqa saamiyada Shiinaha ayaa hoos u sii dhacay siddeed boqolkiiba iyadoo walaac laga qabo dhaqaalaha Shiinaha.
Read more about Suuqa saamiyada Shiinaha oo hoos u dhacay